Inona no ho hita eto Madagascar | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Madagasikara, Inona no ho hita
La Repoblikan'i Madagasikara Izy dia firenena nosy izay ao amin'ny Ranomasimbe Indianina tsara tarehy sy mafana. Io ilay nosy lehibe indrindra atsy Afrika ary iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany. Nosy lehibe kokoa izy io ary misy nosy hafa manodidina azy, amin'ny morontsirak'i Afrika, fa izany amin'ny resaka jeolojika dia famoahana ny zanatany indianina.
Nanjary nalaza tamin'ny horonantsary mihetsika i Madagasikara, marina izany, nefa nosy kanto izaitsizy! Eto afaka manao ny zava-drehetra ny mpitsidika: fijerena vorona sy trozona, fitsangantsanganana, fivezivezena, sidina, fitsangantsanganana an-dranomasina, jono, antsitrika ary maro hafa ...
2 Fizahan-tany eto Madagasikara
3 Torohevitra momba ny dia mankany Madagasikara
Nosy lehibe indrindra 416 kilometatra monja avy eo amin'ny morontsirak'i Mozambika no misy azyFa ny Indoneziana aloha dia tonga fa tsy ny Afrikanina, ary i Indonezia dia mihoatra ny 5 kilometatra lavitra. Taty aoriana dia ho tonga ny eropeana, izay nolavina imbetsaka tamin'ny vintana kely na vitsy. Raha ny tena izy, maro tamin'ireo andevo nalaina ankeriny teto no namarana ny androny tao amin'ny Viceroyalty of Peru.
Ny frantsay no naka ny nosy na eo aza ny zava-drehetra sy ny olon-drehetra mandra-pahatongan'ny firenena fanjanahantany maro, nahatratra ny fahaleovantenany tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny nosy dia tsy misy isalasalana ary nanjary fantatry ny iraisam-pirenena ny tanan'ny fizahantany. Madagaskar manana biby manan-karena sy maro karazana izy, miaraka amin'ny maro biby endemika ary ny sary mivoaka avy any anaty ala mankany amin'ny ala honko, manomboka amin'ny kirihitra mankany an-tendrombohitra sy any ambanivohitra.
Androany dia monina saika ny repoblika Olona iray tapitrisa 20, Kristiana ny ankamaroany nefa koa izay milaza ny Silamo ary miteny ny fiteny eo an-toerana, Malagasy. Faharoa, mazava ho azy, ny frantsay.
Fizahan-tany eto Madagasikara
Rehefa mahita ireo sary ianao dia mieritreritra morontsiraka sy masoandro ary fasika avy hatrany. Tsara ny torapasika eto Madagasikara, miaraka amin'ny rano mafana sy kristaly ary fasika fotsy. Eto no ahafahan'ny olona manao fanatanjahantena sy rano isan-karazany toy ny snorkeling, antsitrika, surf, kitesurfing, fitsofan-drivotra ...
Aiza no tokony halehanao hankafizanao ny torapasika? Misy toerana maromaro. Ao amin'ny Channel Mozambique no misy ny nosy be nosy na Ambariobe. Tsara tarehy io nosy volkanika 320 kilometatra toradroa izy io ary matetika no fiandohan'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay miainga ho any amin'ny morontsiraka andrefan'i Madagascar. Ny nosy ala be io ary misy farihy volkano ary zavamaniry ary biby. Mandritra izany fotoana izany dia misy nosy kely hafa manodidina, anisan'izany Nosy Tanikely, Nosy Komba, Nosy Iranja na Nosy Sakatia.
Raha tianao izany jereo lemur, avy eo mitsidika ny nosy Nosy komba. Raha tianao a valan-dranomasina mahavariana, avy eo mitsidika Nosy tanikely, tena aquarium voajanahary. Raha te hilentika ianao nefa miaraka amin'ny olona vitsy kokoa, ao anatin'ny tontolon'ny làlan'ny natiora, miaraka amin'ny feso angamba izany ny lahatra Nosy sakatia.
Nosy iray hafa mahaliana dia ny Ile Sainte Marie, toerana manan-tantara mbola lavitra ny fizahan-tany faobe. 60 kilometatra ny halavany ary zara raha 5 kilometatra ny sakany. Fantatra fa fialofana piraty, manana haran-dranomasina izay manalavitra azy amin'ny antsantsa ary koa a fialofana ho an'ny trozona humpback izay mahazo miteraka sy miteraka. Ankoatry ny, dobo voajanahary avy any amin'ny morontsiraka no zavatra tsy azonao adino. Toy izany koa ny mahery Ranomasina Emeraoda, izay tratra avy amin'ny tanàna avaratr'i Diego Suarez.
Suarez no tanàna lehibe indrindra amin'ity faritra ity ary manana ny seranana lehibe fahatelo. Niasa teto ny fonja frantsay taloha ka misy soritry ny vanim-potoana fanjanahantany na aiza na aiza. Fa ankoatr'izay dia manana endrika mahafinaritra, torapasika, tendrombohitra marobe misy tendrontany mena ary ny Ranomasina Emerald miaraka amin'ireo nosy virjiny, ny Morontsiraka Ramena ...
I Madagasikara koa dia tanin'ny valan-javaboary sy tahiry nasionaly Mora ny mitsidika miaraka amin'ny mpitari-dalana. Misy ny Valam-pirenena Bemaraha, Lova Iraisam-pirenena, ny Valan-javaboary Abndabise-Mantadua miaraka amin'ny lokony, ny Valan-javaboary Marojey miaraka amin'ny tendrombohitra misy azy, ny Valan-javaboary Ranomafana, ala maintso lalina na ny Valan-javaboary Isalo, amin'ny lemaka karakaina.
Araka ny tsy ampoizinao, ny nosy koa dia manana Lova maro eran-tany, harena tena izy izay notapahan'ny UNESCO arovana satria maneho lova lehibe ho an'ny zanak'olombelona izy ireo. Misy faritra be tendrombohitra atsimo atsinanan'i Ambositra izay nandrafetan'ny olona kanto kanto sy geometrika antsoina hoe Zafimaniry kanto. Ny renivohitry ny fanjakan'ny fanjakana taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia toerana iray manan-tantara ihany koa. Ilay Royal Hill of Ambohimanga.
Misy ihany koa ireo valan-javaboary arovana eo ambanin'ny orbit'ity fikambanana iraisam-pirenena ity: Valan-javaboary Marojejy, Bemaraha, Masoala, Ranomafana, Zahamena, Andringitra ary Andohahela.
Araka ny hitanao dia manana ny zava-drehetra i Madagasikara ho an'ny mpandeha izay te hankafy ny eny ivelany sy ny tongotra. Misy ny te hahafanta-javatra ara-jeolojika, toy ny Tany tsingy, misy bibidia marobe azo jerena amin'ny toetoetrany voajanahary, toy ny lemur na trozona (eo anelanelan'ny volana jona sy septambra), hazo baobab, tandindon'ny zavamaniry eo an-toerana, hazo masina, be voninahitra, ireo nosy paradisa miaraka amin'ny fambolena fary na zava-manitra ...
Torohevitra momba ny dia mankany Madagasikara
Tonga amin'ny sidina fiaramanidina ianao ary tonga any afaka mivezivezy amin'ny taxi sy an-tanàn-dehibe ianao izay afaka mitondra olona eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo miankina amin'ny maodelin'ny fiara. Na aiza na aiza izy ireo.
Misy ihany koa ny lamasinina ao amin'ny nosy, saingy zavatra betsaka kokoa noho ny olona no mandeha aminy. Misy zotra mpandeha roa ihany, ny Fianarantsoa - Manakara Line, amin'ny morontsiraka atsinanana, ary ny Moramanga - Tamatave Line any atsinanana. Amin'ny vola dia misy ny TransLemurie Express sy ny Micheline. Azonao atao koa ny mifindra indraindray amin'ny lakana, amin'ny sambo, amin'ny posiposy.
Voalohany, mila visa ianao izay voahodina ao amin'ny kaonsily na masoivoho indraindray na rehefa tonga ianao, eny amin'ny seranam-piaramanidina. Faharoa, tsy maintsy dinihinao ny toetrandro fa fantatrao fa miova ihany koa ny toetrandro raha ny faritra no jerena. Rahoviana ianao no tokony hitsidika an'i Madagasikara? Marihina fa ny valan-javaboary sasany dia tsy misokatra mandritra ny vanim-potoana orana, fahavaratra, eo anelanelan'ny Novambra sy Martsa ary izany ny vanin-taona maina manomboka ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra. Araka izany, tsara kokoa ny mandeha eo anelanelan'ny volana septambra sy oktobra na ny aprily sy jona.
Mila manao vaksiny ve aho? Amin'ny ankapobeny, tsy misy izay takiana indrindra, amin'ny fanaintainana tsy hidiranao, fa azonao atao ny manao ny sasany prophylaxis tazomoka, manaova vaksiny miady amin'ny hépatite ary miarova tena amin'ny kolera na tazo mavo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Madagasikara » Inona no ho hita eto Madagascar
Gastronomy of Austria: lovia mahazatra
Colombo any Sri Lanka